Ezezikole – SIVUBELAINTUTHUKO
UDkt Nzimande uhlabeke umxhwele nge-IEIP yaseMgungundlovu￼
TSEPO MOTLOKOA UNGQONGQOSHE weMfundo ePhakeme nokuQeqeshwa kwamaKhono uDkt Blade Nzimade ubona inhlansi yethemba kwintsha yaseMgungundlovu nge-Imbali Education and Innovation Precinct (IEIP) ngokuthi kayizile nje kuphela ukuzoyiqeqeshela amakhono kodwa izoyicija ngokuthi ikwazi ukuziqalela ngokwayo amabhizinisi azobe ebizwa yona. UDkt Nzimande ukusho lokhu kade ehambele lesi sikhungo ezohlola ukuthi ngabe siqhuba kanjani ekubeni yinhlansi yethemba kwintsha eyakhele uMgungundlovu. […]
Kutuswe othisha bama-high school ase-Balcomb’s Hill Ciruit KwaMaphumulo￼
TSEPO MOTLOKOA BAPHUME izidlathi zivakashele izindlebe othisha bama-High School aKwaMaphumulo kwi-Balcomb’s Hill Circuit esifundeni iLembe abachonywe uphaphe legwalagwala yiMzikayise Ndlovu Foundation ngomsebenzi wabo abawenzela isizwe njengoba kuvela ukuthi othisha abaningi bale-circuit izifundo zabo zithole o-100% ku-Grade 12 wango-2021. Lo mcimbi beuseLuthuli Museum KwaDukuza uxhaswe nangabeRadio Khwezi lapho uMzikayise Ndlovu ewumsakazi wakhona. Bewuzinyaziwe nguMnu Nhlanhla Nene waKwaNtunjambili […]
TSEPO MOTLOKOA OWEMIDLALO yomoya kuKhozi FM uPhumzile Kubheka ongumsunguli woBhaqa Network utuse iqhaza lothisha baseMkhumbane Secondary School eCator Manor wabahlabisa ngengqama ebabonga ngeqhaza abalibambile ekufundiseni kahle izingane njengoba lesi sikole sithole u-97% wemimphumela ka-Grade 12 nyakenye. UPhumzile owaziwa ngoPK kubalandeli bemidlalo yomoya yoKhozi FM uthe uBhaqa Network lwasungulwa ukulekelela abafundi ekuqheleni ekusebenziseni izidakamizwa nokuxwayisa amantombazane ngengozi yokukhulelwa […]
OWAKWADUKUZA NOHLELO LWEMIFUNDAZE KUBAFUNDI
MAGAYE CELE UMKHANDLU waKwaDukuza enyakatho yesiFundazwe saKwaZulu Natal usunohlelo lokunikezela ngemifundaze kubantu abasha bakule ndawo abanentshisekelo enkulu yokuthi baqhube izifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme. UMkhandlu waKwaDukuza uholwa nguKhansela Lindiwe Nhasa. Kuzokhumbuleka ukuthi lolu hlelo lalo Mkhandlu nangonyaka owedlule ka-2021 belukhona. Lubonakale lulekelela kakhulu abafundi abaningi baKwaDukuza namaphethelo. Lo Mkhandlu ukuchaza njengento emqoka kakhulu ukubaluleka kokulekelelwa kwabafundi […]
Inkosi yaKwaMpumuza ingenelela ukulekelela ezemfundo
TSEPO MOLEFE ISIZWE saKwaMpumuza eMgungundlovu samukele izinhlelo zenkosi yaso entsha uKhethukuthula Zondi zokungelela ezikoleni ezingaphansi kwalesi sizwe ukubheka ukuthi ngabe ezemfundo zihamba kahle yini nokuthi abafundi nabazali babambisene yini nothisha emsebenzini wesikole. Inkosi Zondi yethule inhlangano eyisungulile ebizwa ngoBukhosi Emfundweni okuhloswe ngayo ukunikeza ubuholi bendabuko ithuba lokuba neso nezwi emfundweni yezingane ikakhulukazi ezikoleni ezingaphansi kwesizwe saKwaMpumuza. […]
Kutuswe uMnyango wezokuThutha namabhayisikile anikelwe abafundi eMgungundlovu
TSEPO MOTLOKOA KUQHUME umikizo KwaMzimba Primary School naseMzamweni High School eMgungundlovu kutheleka uNkk Sindisiwe Chikunga oyiPhini likaNgqongqoshe woMnyango wezokuThuthuka kuzwelonke etheleka kulezi zikole namabhayisikile awu-500 anikelelwe abafundi abahamba amabanga amade ukuza esikoleni. Lamabhayisikili athulwe ngaphansi kohlelo lwalo mnyango olubizwa ngeleSHOVA KALULA oluhambisana nomkhankaso wokuxwayisa ngokuphepha emgaqweni. Kuthiwe azolekelela labo bafundi okubathatha isikhathi eside ukufinyelela esikoleni ngenxa […]
IWELE OKOKUGCINA ENSABEKHULUMA HIGH SCHOOL IMBEWU YOKUGCINA KAMASIPALA WASONDINI KA R10 000 WOKUKLOMELISA IZIKOLE EZIPHASE NGO 100%.
BEKUWUSUKU lokugcina namhlanje lukaMasipala wasOndini lokuhambela zonke izikole eziyisithupha eziphase kahle umatikuletsheni kunyaka ka 2021. Umbiko othunyelwe Loluhlelo lugoqelwe eNsabekhuluma High School nayo engezinye zezikole ezenze kahle. Lesi sikole sinomlando ongemuhle wokungaphasi kahle ngenxa yezinkinga azike zahlasela lendawo. Ezinye zazo kwaba yizimpi zezigodi ebeziqubuka ngaphakathi zize ziphazamise uhlelo lokufunda nokufundisa. Lokhu kuyithintile kakhulu imiphumela yabafundi […]
TSEPO MOTLOKOA USOMLOMO wesiShayamthetho saKwaZulu-Natal uNkk Nontembeko Boyce ujube ithimba lamalungu esishayamthetho sesifundazwe ukubheka ukusebenza kwezikole ezifundeni okubalwa kuzona nesaseThekwini uhambo lwalo oluqale ngoLwesithathu lomhlaka 26 noLwesine lomhlaka 27 kuJanuary. Leli thimba lamalungu esishayamthetho belihambisana nezikhulu zoMnyango wezeMfundo, izikhulu zezemfundo namalungu ezigungu zezikole (school governing bodies). NgoLwesihlanu lomhlaka 28 isifunda ngasinye sethule umbiko ngalokho okutholiwe ukuze […]
Posted on January 28, 2022 February 11, 2022 Author Admin	Comment(0)
TSEPO MOTLOKOA ABAZALI babafundi abebefunda u-grade 12 ngonyaka odlule eGeorgetown High School e-Edendale eMgungundlovu batheleke ngobuningi babo emagcekeni esikole bezobonga othisha ngokukhweza kwelenyoni izingane zabo njengoba lesi sikole sithole u-100% wemiphumela ka-grade 12. Laba bazali batheleke becula izingoma zokutusa bephethe nezingqwembe obungathi uma ukude ubone sengathi bayabhikisha kanti lutho kulezingqwembe kubhalwe amagama okutusa nokubonga. Ekhuluma […]